जेसीज र रोटरीको निःशुल्क स्वाथ्य शिविर, खाना र आरामको चेतनामा कमी : डाक्टर | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / जेसीज र रोटरीको निःशुल्क स्वाथ्य शिविर, खाना र आरामको चेतनामा कमी : डाक्टर
जेसीज र रोटरीको निःशुल्क स्वाथ्य शिविर, खाना र आरामको चेतनामा कमी : डाक्टर
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार June 9, 2019	0 91 Views
घोराही। मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा अंशुमाली जोशीले घोराहीको दुईदिने स्वास्थ्य शिविरमा बिरामी जा“चेपछि थाहा पाउनुभयो, अलका अस्पताल काठमाडांै पुग्ने धेरै विरामीहरु यसै क्षेत्रका रहेछन्।
‘खानपिन र आराम गर्ने चेतनाको कमी देखियो’– डा. जोशीले भन्नुभयो– ‘तौल धेरै छ। चिन्ता गर्ने र तनावमा आउने देखियो।’ उहा“का अनुसार त्यसैको असरले हर्मोनसम्बन्धी रोगहरु बढाउ“छ। मधुमेहका विरामी बढ्नुको मुख्य कारण यसैमा छ। बिरामीको संख्या न्यून गर्नका लागि खानपिनमा चेतना बढाउनुपर्छ। शारीरिक व्यायाम गर्ने, शरीरलाई धेरै मोटो हुन नदिने, चिन्ता नगर्नेजस्ता कुराहरु सिकाउने र त्यही अनुसारका व्यवहार गर्न जरुरी छ।
‘धेरै विरामी हाम्रो सम्पर्कका रहेछन्’– डा. जोशिले थप्नुभयो– ‘केही नया“ देखिएका छन्, यो फ्लोअप जस्तै भयो।’ उहा“ले उचित ठाउ“मा आएको महसुस गरेको बताउनुभयो। डा. जोशीका अनुसार आफ्ना बिरामीहरुको हरेचाह गरेजस्तै लाग्यो। उहॉ“का अनुसार मधुमेह र थाइराइडका बिरामी धेरै हुनसक्छन्। यसको लक्षण नदेखिने भएकाले धेरैले थाहै पाउ“दैनन्। लक्षण देखिएपछि नभई ज“चाएपछि पत्ता लाग्ने रोग भएकाले सबैले जाच गरेपछि मात्रै वास्तविक तथ्यांक आउने बताउनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था जा“च गराई राख्न उहा“को आग्रह थियो।
मधुमेह तथा थाइराइडका बारेमा जानकारी दिन, चेतना बढाउन र उपचार गर्न वर्षमा चार पा“च ठाउ‘ जाने गरेको डा. जोशीले जानकारी दिनुभयो। आयोजकको मेहनतप्रति खुशी देखिएका डा. जोशीले धेरैजनालाई सेवा दिन पाएको बताउनुभयो। उहा“ले हरेक व्यक्तिले वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य जाच गराउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। खानपिनमा ध्यान दिने, तौल बढी हुन नदिने, चिन्ता नगर्ने, मनमा कुरा नखेलाउने जस्ता उपाय सुझाउनुभयो। उहा“लाई विश्वको अग्लो त्रिशुल सांकेतिक विशेष उपहारले आयोजकले सम्मान गरेका थिए।
कार्यक्रमको समापनका क्रममा अल्का अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत भगवान केसी, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरु, ल्याव पार्टनर ओम पोलिक्लिनिकका प्रतिनिधिलगायतलाई जेसीजका अध्यक्ष वसन्त अधिकारी र रोटरीका कावा अध्यक्ष डा. चेतनारायण पाण्डेयले मायाको चिनो प्रदान गर्नुभएकोे थियो। समाजमा केही गरौं, केही दिउ“ भनेर शिविर चलाएको रोटरी क्लव अफ दाङका कावा अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका अध्यक्ष डा चेतनारायण पाण्डेयको भनाइ थियो। प्रख्यात डाक्टर आएको खबर प्रसारित भएपछि सेवा लिनेहरुले निकै चासो दिएका थिए। नाम दर्ता गराउन र नाप तौल लिन बसेका जेसीजका मीनराज भाट सेवाग्राहीले घेरिनु हुन्थ्यो। प्रेसर जाच गर्ने जेसीजका स्वास्थ्य संयोजक श्यामकुमार गिरी पनि निकै व्यस्त देखिनुहुन्थ्यो। यस्ता गतिविधिले धेरैले सेवा लिएको पुष्टि गर्दथ्यो।
सबैजना व्यस्त भएर काम गरेकाले सेवाग्राहीलाई सजिलो भएको थियो। ल्यावमा केही ढिलासुस्ती हुनाले समयमा रिपोर्ट नपाएको केही विरामीले गुनासो गरेका थिए। विरामीले दश दिनको निःशुल्क औषधि पनि पाएकाले फाइदा महसुस गरेका थिए। घर आगनमै प्रख्यात विशेषज्ञ डाक्टर पाउ“दा सबै भन्दा खुशी लागेको सेवाग्राहीले बताएका थिए। शुक्रवार र शनिवार चलेको दुईदिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट पा“च सय ६० जनाले सेवा लिएको जेसीजका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो। रोटरी क्लव अफ दाङ र त्रिभुवननगर जेसीजले संयुक्तरुपमा घोराहीको जेसीज हलमा शिविरको आयोजना गरेका थिए।
Previous: सर्वोदय भवनको शिलान्यास : ‘पुस्तकालय ज्ञानलाई परिपक्व बनाउने थलो’
Next: माटोको भाँडा बिक्नै छाडे